December | 2012 | Somaliland.Org
December 31, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org) – Munaasibada lagu xusayay sanad-guuradii afraad ee ka soo wareegtay maalintii asaaska dhallinyarada ee Unuga Wadanniyadda. Munaasibadan oo caawa lagu qabtay Huteel Imperial ayaa waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaha xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe, xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac, gudoonka Jaamacadda Camuud iyo marti-sharaf. Ugu horeyn waxaa munaasibadaasi ka hadlay Gudoomiyaha Ururka […]
December 30, 2012	Waxa wax lala yaabo nagu noqday Markii si lama filaan ah shirkadda Isgaadhsiinta TELESOM ay khadkeeda Internet-ka ka xidhay shabakadda wararka ee Somaliland.Org, 24-kii saacadood ee la soo dhaafay, iyadoo dadka isticmaala Inter-net-ka TELESOM aanay tahli Karin inay Booqdaan Mareegta Somaliland.Org. Ma garanayno asbaabaha shirkada TELESOM ku dhaliyay inay khadkeeda Internet-ka ka xidho shabakadayada. Tallaabadda […]
Mo Farah Oo Lagu Xayiray Madaarka Magaalada Portland Ee Gobolka Oregon
December 30, 2012	Orodyahanka Soomaaliga ah ee haysta dhalashada dal Britain Mo Faarax ayaa laamaha sirdoonka dalka Maraykanka waxa ay su’aalo ku weydiiyeen garoonka magaalada Portland ee gobolka Oregon. Mo Farah iyo qoyskiisa ayaa ka soo kicitimay dalka Canada, hase ahaatee Mo Farah waxa halkaas loo hakiyey arrimo la xidhiidha argagixisada oo su’aalo laga weydiiyey.
December 30, 2012	The Government of the Republic of Somaliland welcomes the outcome of Somaliland’s November 28th local elections, our latest in a series of several presidential, parliamentary and local elections stretching back to 2002.
December 30, 2012	Qof waliba degdeggiisa wuxuu u egyahay mid ku socda ballan uu ka habsaamay ama shaqo laga sugayo. Dadku waxay u wada muuqdaan kuwo igu cusub, marka laga reebo dad tiro yar oo markay iga hor yimaaddaan aanu is-weji garanayno ama is-magac-dhebi karno. Sababtoo ah, halka aanu joognaa maaha dalkii hooyo ee waa qurbe. Aniga oo […]
December 30, 2012	Gudoomiyaha Wargeyska Geeska Afrika Kamaal Axmed Cali, Tafatiraha Wargeysa Geeska Afrika Maxamed Xuseen Ramboo, Gudoomiyaha Wargeyska Foore Maxmed Ilka-Case, Gudoomiyaha Wargeyska Saxafi Cabdifataax Maxamuud Caydiid, Tafatiraha Saxafi Mustafe Sheekh Cumar Geeddi, Tafatirada Wargeyska Haatuf Axmed Cali Cige, Tafatiraha Wargeysa Saxansaxo Saleebaan Ibaraahim Xaashi, Agaasmiha Talfishanka HCTV Maxmed Cabdi Sheekh (Ilig), Axmed Cumar Cadaani (Axmed Saafi) […]
December 30, 2012	Waa la isku raacsan yahay badi ba in warku maanta u dhigmo oo la maqaam yahay quutal daruuriga maalinlaha ah ee afka iyo gacanta aadanaha u dhexeeya, Soomaalida na waxa ba lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay quruumaha ugu warka iyo wacaasha jecel. Soomaalidu waa “war ku nool” baa la yidhaahdaa. Marka laba nin […]
“Marwadu Qaranka Waxba Imay Farin, Imana Fari-doonto” Wasiir Duur
December 29, 2012	Hargeysa(Somaliland.Org) -Wasiirka arrimaha gudaha Md. Maxamed Nuur Caraale (Duur), ayaa ka jawaabayn eedayn uu u jeediyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, oo Arbacadii laga reebay diyaarad uu ka raacayay madaarka Berbera oo ku socotay magaalada Muqdisho, isagoo Mr. Cabdiqaadir ku eedeeyay wasiir Duur, inuu bixiyay in diyaaradda laga soo reebo.
Maayarka cusub ee Bali-gubadle oo xilkii la wareegay
December 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Maayarka Cusub ee Degmada balligubadle Md Cabdi iimaan Jaamac ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugala wareegay Mayorkii hore ee Degmadaasi Md Ibraahin Colaad. Munaasabad lagu qabtay Hotel Al-xayaat ee magaaladaasi ayaa waxaa ka qayb galay Gudooiyaha Gobolka Balligubadle Md Jamaal Hurre. Maayarkii hore ee Degmadaasi Md. Ibraahin Colaad. Ayaa uga mahadceliyey dadweynaha […]
Gudoonka Waxbarashadda Buuhoodle oo ka warbixiyay xaaladda waxbarashada
December 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Gudoomiyaha waxbarashada ee Gobolka Buuhoodle Md Cabdirisaaq saleebaan Aadan (John) ayaa maanta ka warbixiyey xaaladda waxbarasho ee Gobolkaasi. Md Cabdirisaaq Saleebaan oo isagoo ku sugan magaalada Buuhoodle u waramayey wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA ayaa sheegay in shaqaalahii waxbarashada ee Buuhoodle ay qayb ka mid ahi yimaadeen Magaalada Burco isla markaana ay hay’adda shaqaaluhu […]